Ungha Gong - WRSP
GUN GONG TIMELINE
1992 (May): Li Hongzhi malitere ịkụziri Falun Gong ọha na eze.
1992 (Septemba): untù Qigong Scientific Research Organization nakweere Falun gong.
1992 (Disemba): Li Hongzhi kwetara dị ka "kpakpando" nke Asia Health Expo, nke emere na Beijing.
1993 (Eprel): Akwụkwọ mbụ Li Hongzhi, China Falun Gong, e bipụtara.
1994 (Disemba): Li Hongzhi kwuru okwu ihu ọha ikpeazụ ya na China.
1995 (Jenụwarị): Isi ọrụ Li Hongzhi, Zhuanfalun, e bipụtara.
1996: Li Hongzhi guzobere obibi na United States.
1996 (March): Li Hongzhi wepụrụ Falun Gong na Qigong Scientific Research Organisation.
1996 (June): Mbido mbụ nke nkatọ nke Falun
Gong gosipụtara na nnukwu akwụkwọ akụkọ.
1997-1999: Nkatọ nke Falun Gong mụbara na mgbasa ozi ndị China; Falun Gong zara ya site na ngosipụta ndị na-emeghị ihe ike na-eche banyere mgbasa ozi.
1999 (Eprel 25): Ihe karịrị ndị ọrụ Falun Gong 20,000 gosipụtara na mpụga isi ụlọ ọrụ Communist China na Beijing.
1999 (May): "Amamihe doro anya," saịtị mbụ nke Falun Gong, guzobere na mpụga China, na-egosi mkpa ndị Falun Gong nọ na mpaghara ndị China.
1999 (Summer-Fall): Ndị ọchịchị China nyefere usoro dị iche iche na-akwado Falun Gong dị ka "òtù nzuzo jụrụ okwukwe."
1999-2001: Ndị na-eme Falun Gong gara n'ihu na-egosi na China, n'agbanyeghị na ndị ọchịchị na-akụda ha.
2000 (May): Ndị ọkachamara Falun Gong guzobere Dajiyuan (nsụgharị Chinese n'asụsụ Chinese Epoch Times akwụkwọ akụkọ).
2001 (Jenụwarị 23): Igbu onwe onye nke ndị ọrụ Falun Gong ise pụtara na Tian'anmen Square, Beijing mere. Faltù Falun Gong gọnahụrụ na mmadụ ise ahụ bụ ndị nkuzi, mana Falun Gong rịọrọ na China na ebe ndị ọzọ.
2002: Falun Gong guzobere ụlọ ọrụ telivishọn ọhụrụ nke Tang na New York.
2004 (November): Epoch Times bipụtara “Nine Criticisms of the Communist Party.”
2009: Onye isi ochichi nke ndi ochichi nke ndi isi ochichi, Xi Jinping, ka enyere aka oru ngo iji mebie ndi Tibet, ndi ochichi onye kwuo uche ya, na ndi Falun Gong na ncheta ncheta.
2009 (Machị): Ulo Omeiwu nke United States nyefere mkpebi na-amata ma katọọ mkpagbu na-aga n'ihu na Falun Gong na China.
Falun Gong (法轮功), ma ọ bụ Falun Dafa (法轮 大法), bụ nkuzi ime mmụọ nke e gosipụtara n'ihu ọha na North-East China. Li Hongzhi (李洪志) na Mee 1992. Ọ bụ akụkụ nke "qigong boom" (qigong re 气功 热), otu ngagharị nke gbasara 1980s na 1990s ma bụrụ onye ama ama, ọkachasị obodo China. Qigong ("ịdọ aka ná ntị nke ume dị mkpa") bụ usoro dịgasị iche iche nke dabere na nkwenkwe na ndị ọrụ nwere ike, site na mmegharị ahụ, ntụgharị uche, na nhụta anya, na-achịkọta ume dị mkpa (qi) n'ime ahụ ha iji nweta ahụike na anụ ahụ ka ukwuu . Ọ bụ ezie na nkwenkwe na omume ndị dị otú ahụ nwere mgbọrọgwụ oge ochie, qigong nke oge a bụ ihe mepụtara na narị afọ nke iri abụọ ma hazie ya na mbido 1950 dị ka akụkụ nke okike nke Ọgwụ Omenala China na Ndị Republic of China (Palmer 2007).
Qigong ghọrọ nnukwu ìgwè n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ. Na ngwụsị afọ ndị 1970s, a na-ekwu na nchọpụta ụlọ nyocha chọpụtara na qi nwere ihe, ndụ sayensị. Nchọpụta a mere ka ọ pụta ìhè na post-Mao China mesiri ike na "anọ Modernizations," a ga-enweta site na sayensị na teknụzụ, na ndị ọchịchị China nyere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na nnukwu mmepe nke qigong. Ọ bụ “ndị isi qigong,” ndị a na-ekwu okwu ya bụ ndị nwere ikike karịrị nke a bụ naanị ịkụziri ndị na-eso ụzọ ka ha kesaa Qi. Ndị isi Qigong nwere ike ịkọwapụta nke ha iji gwọ ndị ọrịa, kpọọ mmiri ozuzo, ma rụọ ọtụtụ ọrụ ebube. Ndị nna ukwu nwere ihe ịga nke ọma wulitere netwọkụ nke mba niile nke ọtụtụ nde ụmụazụ ndị kwụrụ ụgwọ iji gaa okwu nkuzi nke nna ha ukwu na mpaghara egwuregwu a na-ere ere (ebe a kwenyere n'okwu nke nna ukwu ahụ nwere qi ya dị ebube), zụta akwụkwọ nna ya ukwu na ngwa ndị ọzọ, wee soro ije na akuko qigong.
Li Hongzhi na Falun Gong so na ndị otu qigong, ndị qigong nabatara ha na mbido oge mbọ Li na-agba iji kwado Falun Gong. N'otu oge ahụ, Li chọrọ ịmata ọdịiche dị n'etiti nkuzi ya na ndị ọzọ bụ ndị e boro ebubo mpụ na chicanery ka ụfọdụ nna ukwu ji ịnụ ọkụ n'obi nke ụmụazụ ha nweta nnukwu ego. Li kwere nkwa inyere ndị na-eso ụzọ ya aka 'ịzụlite n'ọkwa dị elu' n'oge na-adịghị anya ha malitere omume ha. N'otu aka, nke a bụ mbọ iji zere ike ọrụ ebube na-enwu gbaa nke ụfọdụ ndị isi qigong gosipụtara. Dịka ọmụmaatụ, Li gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha ghara iji qi ha gwọọ ndị ọzọ. N'aka nke ọzọ, nkwa Li kwere iduzi ndị na-eso ụzọ ya na ịkọ ihe n'ọkwa dị elu na-adabere na atụmatụ nke Li ike dị egwu: ọ na-ekwu na ya nwere ike ime ka ahụ ha dị ọcha, n'etiti ụzọ ndị ọzọ, site na ịwụnye ụkwụ na-aga n'ihu n'ime afọ ha. Ike ọrụ ebube Li dị iche na nke ndị nna ukwu ndị ọzọ n'ihi na ha mere na ọkwa a na-adịghị ahụ anya, ma dabere na okwukwe karịa ọrụ. Mgbalị Li nwere nnukwu ihe ịga nke ọma. N'agbata afọ 1992 na njedebe nke 1994, ọ gara China, dee akwụkwọ ma ree ya, wee wuo ọgbakọ zuru ụwa ọnụ nke ndị na-eso ụzọ nke gụrụ nde iri (Penny 2003).
Li nyere okwu nkuzi ikpeazụ ya na China na Disemba 1994 (ihe odide ya ga - abụ akwụkwọ ya kacha mkpa, Zhuanfalun(Kukirodesa), wee hapụ China, emesị mee ka ndị mmadụ nọrọ na United States na 1996. Mkpebi ya ịhapụ China bụ eziokwu. Ndị na-asọpụrụ Qigong n'etiti ndị ọchịchị China malitere ịmaliteghachi aka, ọzọkwa, dị ka òtù ndị isi nkata, Falun Gong ghọrọ otu n'ime nsogbu nke ịkatọ nkatọ. Ma, Li adịghị na listi ojii; okwu nkuzi ya mgbe ọ hapụsịrị China nọ na Embassy nke China na Paris, ebe onye nnọchianya ahụ kpọrọ Li. O mechara lekwasị anya n'ịgwa ndị Falun Gong okwu n'asụsụ ndị China, karịsịa na North America. Ọ laghachiri China n'oge ụfọdụ, ma enyeghị ya okwu ọzọ (Ownby 2008).
Ma enweghị Li na China egbochighị ịkatọ Falun Gong, ọ bụ ezie na qigong na Falun Gong gara n'ihu t ị nwere ndị na-agbachitere n'ebe dị elu. Ndị omekome Falun Gong mereghachi omume na nkatọ mgbasa ozi site n'inwe mmegharị ngosi ndị na-emeghị ihe ike na telivishọn ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ ndị katọrọ ha, na-arịọ maka nkwụghachi azụ ma ọ bụ oge hà. Nke a bụ ọ bụghị ihe a na-eme na China, mana enwere ihe ngosi 300 dị otú ahụ n'etiti 1996 na 1999, na ndị ọkachamara Falun Gong yiri ka ha enweela mmeri karịa mgbe ọ bụla. Ngosipụta ndị a na-etolite na nnukwu ihe omume gbanwere akụkọ ihe mere eme nke Falun Gong. Na Eprel 25, 1999, ụfọdụ ndị ọrụ Falun Gong 20,000 pụtara na mpụga ọnụ ụzọ ámá nke Zhongnanhai (中南海), isi ụlọ ọrụ nke ndị Kọmunist China na Beijing. Ndị uwe ojii mere ka ngosipụta a pụta wee kọọ akụkọ ọjọọ na obodo agbata obi nke Tianjin, ebe ndị ọrụ Falun Gong mere ngagharị iwe na mahadum ụbọchị ole na ole gara aga (Tong 2009).
Li Hongzhi nwere olile anya na ngosipụta nke ike ya ga-eduga ndị ọchịchị China ịkatọ omume obi ọjọọ ndị uwe ojii ma kpochapụ ụzọ maka omume iwu nke Falun Gong. Kama nke ahụ, ndị ọchịchị weere ngosipụta ahụ dị ka nnukwu ihe ịma aka, na oge okpomọkụ na ọdịda nke 1999 were usoro dị iche iche iji kpọọ Falun Gong dị ka "òtù nzuzo heterodox," jide ndị isi ya, ma gbasaa nzukọ ya. Ma nke a dị mfe ikwu karịa eme. N'ime China, ndị ọrụ Falun Gong, ọtụtụ n'ime ha bụ ndị nọ n'ọkwa ndị bi n'obodo ndị na-enweghị echiche nke itinye aka na "heterodoxy," na-eme ngagharị na mpaghara na isi obodo. Na mpụga China, ndị ọrụ Falun Gong wuru websaịtị na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na ndị nta akụkọ, na-ekwu na a na-awakpo ikike ha nwere nnwere onwe ikpe okpukpe na nnwere onwe ikwu okwu na China (Ownby 2003). Ọnọdụ a guzoro ruo Jenụwarị nke 2002, mgbe ndị ọrụ Falun Gong ise pụtara onwe ha gbara ọkụ na Tian'anmen Square dị n'etiti Beijing. Ọ bụ ezie na Li Hongzhi mere mkpesa na ndị a abụghị ndị Falun Gong n'ihi na ndị nkuzi na-akwadoghị igbu onwe ha, ihe omume ahụ ghọrọ nnukwu mmeri mmekọrịta ọha na eze maka China, ebe Falun Gong dịzi ka "òtù nzuzo dị egwu."
Ma mmeri ahụ abụghị ihe doro anya. E wezụga akwụkwọ akụkọ ahụ, esemokwu dị n'etiti ndị ọkachamara na PRC na Falun Gong ka na-aga n'ihu ugbu a. N'ịbụ ndị na-egbuke egbuke na mgbasa ozi mgbasa ozi dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ nke ọgụ ha, Falun Gong guzobere mgbasa ozi ha (akwụkwọ akụkọ ahụ Epoch Times na telivishọn New Tang Dynasty, n'etiti ndị ọzọ) ma gbasaa ebe nrụọrụ weebụ ha (saịtị ndị bụ isi bụ falundafa.org na en.minghui.org). Ha agbasola nduzi nke China site na usoro iwu nke mba dị iche iche na site na ụlọ ọrụ mba ụwa dịka Kọmitii Na-ahụ Maka Ihe Ndị Ruuru Mmadụ na United Nations na thelọikpe Criminal International. Ha abanyela na mmemme telivishọn na China iji gosipụta nke ha nke eziokwu banyere Falun Gong. Gọọmentị China azaghachila na mbọ a site na ịga n'ihu mkpọsa nke iwepụ. Rightstù Human Rights Watch na Amnesty International na-aga n'ihu na-akọ na ndị Falun Gong nọ n'okpuru njide na mmekpa ahụ; ebubo nke iwe ihe ubi nke ndị mkpọrọ Falun Gong ka na-arụrịta ụka, mana anaghịzi ahapụ ya.
Otu nsonaazụ nke esemokwu ahụ na-adịte aka bụ ebumnuche: ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịchọta nkọwa na-enweghị isi na Falun Gong. Gọọmentị China nwere nnukwu ọrụ maka nke a; ịka ụda Falun Gong bụ "otu ịrọ òtù heterodox" hapụrụ ohere maka nuance. Mana Falun Gong abụghị onye na-enweghị ntụpọ. Kemgbe ọtụtụ afọ, ihu ọha na-emewanyewanye ịlụ ọgụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na ịgbachitere onwe ya, na-emepe echiche jọgburu onwe ya nye ndị na-abụghị ndị ọkachamara nke na-apụtaghị na mbụ (Junker 2014).
N'otu ọkwa, nkwenkwe ụgha Falun Gong yiri nke ọtụtụ ụlọ akwụkwọ nke qigong: ọ bụrụ na mmadụ ebie ndụ omume ọma, ma na-eme qigong n'okpuru nduzi nke nna ukwu nwere nghọta, mmadụ nwere ike ịmeghe ikike / ahụ enweghị ike ma bie ndụ zuru oke, na-enweghị ọrịa, ma eleghị anya nweta nghọta ma ọ bụ ọbụna anwụghị anwụ. Ma isi okwu Li Hongzhi, Zhuanfalun, bụ “oge ọhụụ” mish-mash nke isiokwu sitere na nkwupụta mmụọ ime mmụọ ọdịnala ndị China na echiche ndị parascientific, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Isi okwu nke Li bu ndi iche na okwu ndi ajuju ndi a choputara na ederede "sectarian" nke okpukpe a ma ama nke China: ebibila ma megharia uwa otutu oge, ma obu "ndi a hoputara" na-adi ndu na nbibi nke ndi mmadu n'ime uwa ohuru. Ndị nabatara Li dị ka nna ha ukwu ga-azọpụta. Ndị na-eso ụzọ Li ga-ebi ndụ nke "eziokwu, ịdị mma, na ndidi" (zhen shan ren 真善忍), omume ọma nke Falun Gong, nke a chọkwara ịbụ ihe mejupụtara nke eluigwe na ala (Ownby 2008).
ma Zhuanfalun na-anọkarịrị na apocalypse na ndị ọzọ na nduhie mmadụ na "mgbakwunye" ka oge ọgwụgwụ na-eru nso. Ihe ka ukwuu n'ike ume nke Li na-adabere na sayensị, nke ọ chere na o duhiela ihe a kpọrọ mmadụ. N'otu oge ahụ, Li anaghị akọcha sayensị ka ọ kọwaa adịghị ike ya, dị ka ihe atụ ya na-akọwa banyere karma gosipụtara. Na nkuzi Buddha ọdịnala, karma na-ezo aka na nchikota nke omume ọma na ihe ọjọọ emere n'oge ndụ, nke na-ekpebi ọkwa nke ịdịghachi ndụ. Li Hongzhi na-arụ ụka na karma bụ mkpụrụ ndụ cellular ojii n'ime ahụ, ketara dị ka nsonaazụ nke omume ọjọọ na ndụ ndị gara aga, nke enwere ike gbanwee, site na nhụjuanya (ya bụ, nnagide) na ịkọ ihe, n'ime ihe cellular ọcha, nke bụ omume ọma. Nke a bụ ihe kpatara na ndị Falun Gong ekwesịghị ịchọ nlekọta ahụike mgbe ha na-arịa ọrịa. Ọrịa bụ ụdị nhụjuanya, nke na-enyere onye ọrụ ahụ aka ịgbanwe onwe ya. N'ezie, okwukwe n'ihi okwukwe bụ otu ụdị ahụhụ, isiokwu Li Hongzhi kwusiri ike ugboro ugboro na nke abụọ N'ezie esemokwu dị n'etiti Falun Gong na ndị ọchịchị China. Ihe ndị metụtara Mesaya na apocalyptic dị n'ihe odide Li aghọwo ndị a ma ama na omume kemgbe ọtụtụ afọ (Penny 2012).
Falun Gong adịghị emegharị anya nke ukwuu. Omume na-eme ihe omume Falun Gong nke ọma (lee ihe osise dị na China Falun Gong ), na karịa ọgụgụ na ịgụgharị nke Zhuanfalun , nke a na-eme iji guzobe mmekọrịta dị n'etiti onye ọrụ na nna ukwu. Mgbe ọ hapụrụ China n'oge 1995, Li nyere iwu na site ugbu a Zhuanfalunga-abụ ederede ụgha nke Falun Gong na na ọ dịghị onye nwere ike ịkụziri ya ọzọ karịa ya. N'ihi ya, nzukọ Falun Gong nwere obere mkparịta ụka banyere ozizi. Ọtụtụ omume bụ onye ọ bụla, a pụkwara ime ya n'ụlọ, ma ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-enwe obi ụtọ izute ọnụ iji mee ihe omume (Ownby 2008).
Li Hongzhi ka bụ onye ndu kachasị nke Falun Gong. O wuru nnukwu nzukọ na China n'etiti 1992 na 1994, nke emebilarị ugbu a (ọ bụ ezie na "mkpụrụ ndụ" n'okpuru ala ga-adịrịrị adị), ma tụọ ọtụtụ ndị isi Falun Gong mkpọrọ. N'èzí China, ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ, ụfọdụ ndị China na ụfọdụ ndị Western, na-akwado Li, bụ ndị mejupụtara ihe yiri ka ọ bụ "kabinet ya." "Otu" ahụ bụ ọkachasị na ịntanetị na mgbasa ozi Falun Gong. Falun Gong enweghị ụlọ arụsị ma ọ bụ ebe a na-efe ofufe (ma n'ezie anaghị ewere onwe ya "okpukpe"). Ọ na-agbazinye ma ọ bụ gbazinye ohere (site na mahadum, ebe obibi, ụlọ obibi) maka nzukọ kwa izu ma ọ bụ nzukọ kwa ọnwa. Maka nzukọ buru ibu, dị ka "Nzukọ Ahụmịhe Ahụmịhe Ahụ" emere kwa izu ole na ole ma ọ bụ ọnwa ole na ole na Falun Gong dị ka Toronto, New York, ma ọ bụ Chicago, ndị na-eme ihe na-atụnye ego na mgbazinye ohere na mahadum ma ọ bụ ụlọ nkwari akụ. Otutu n'ime ụzọ maka ọrụ ndị a yiri ka ọ bụ obodo, Falun Gong dịkwa ka a na-achịkwa ya. Li Hongzhi na-apụta mgbe ụfọdụ, na-ekwughị ọkwa, na Mgbakọ Ahụhụ Ahụhụ, mana ma ọ bụghị ya, aka ya, ma ọ bụ nke ndị ndụmọdụ ya dị nso, apụtaghị ozugbo (Tong 2009).
Falun Gong na-ekwusi ike na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ya (nke Epoch Times akwụkwọ akụkọ na New Tang Dynasty) bụ ọrụ nke ndị ọrụ mpaghara. Ọ bụ ezie na ndị ọrụ mpaghara na-enye ọtụtụ ọrụ afọ ofufo maka ọrụ ndị a, ma eleghị anya ụfọdụ na-enyekwa ego, o siri ike ikwenye na ọrụ ndị dị otú ahụ zuru oke ma dị oke ọnụ anaghị enweta enyemaka ego n'aka nnukwu "nzukọ", n'agbanyeghị ụdị ọ ga-abụ.
Ihe ịma aka kachasị Falun Gong bụ ịkwụsị esemokwu ahụ na steeti China, n'agbanyeghị na nke a nwere ike ọ gaghị adakwasị Falun Gong. N'elu na karịa eziokwu ahụ bụ na Falun Gong mepụtara na mbụ na China, yana na ọtụtụ ndị ọkachamara nọ n'ụlọ mkpọrọ ma ọ bụ na-ata ahụhụ site na ụdị mkpagbu na ịkpa oke dị iche iche, omume ahụ n'onwe ya yiri ka ọ na-arịwanye elu ma na-agbaghasị oge, dị ka isiokwu nke ịlụ ọgụ, martyrdom , na ndị na-emegide ọchịchị Kọmunist abịawo n'ihu. Agbanyeghi na okpukperechi nke otu puku afọ nke nkuzi nke Li Hongzhi enweghi otutu ihe akaebe na oge mbu nke nmeghari a, ha di ugbu a. Fọdụ ndị ọkachamara nwere ike ikwu maka obere oge na njedebe ụwa. Na nke a bụ ihe kachasị n'ihi mkpọsa gọọmentị nke mkpochapụ megide ìgwè ahụ doro anya, mana ịkatọ mmejọ anaghị enyere aka na mmegharị ahụ na-eme atụmatụ n'ọdịnihu.
Junker, Andrew. 2014. "Onye na-eso ụzọ Agency na Charismatic Mobilization na Falun Gong." Sociology nke Okpukpe 75: 418-41.
Onye nwe ya, David. 2008. Falun Gong na Ọdịnihu nke China. New York: Oxford University Press.
Onye nwe, David. 2003. "Falun Gong n'ime ụwa ọhụrụ." Akwụkwọ European Journal of East Asia Studies 2: 303-20.
Palmer, David A. 2007. Ahụhụ Qigong: Body, Science, na Utopia na China. New York: Ụlọ ọrụ University Press.
Penny, Benjamin. 2012. Okpukpe nke Falun Gong. Chicago: Chicago University Press.
Penny, Benjamin. 2003. "Ndụ na Oge nke Li Hongzhi: Falun Gong na Okpukpe Biography." Ụlọ nke dị na China 175: 643-61.
Tong, James. 2009. Ugwoobi nke obodo a machibidoro iwu: Mmechi nke ugha na China 1999-2005. New York: Oxford University Press.